UJamie lee TikTok: Indlela ekuMva kokuTokTok | XperimentalHamid
Imidiya yoluntu idlala indima ebaluleke kakhulu kubomi banamhlanje. Okona kubaluleke kakhulu, ngowona mthombo wokuzonwabisa ngexesha lokutshixeka. I-TikTok ithathwa njengenye yezona zixhobo zibalulekileyo ezisetyenzisiweyo ezisetyenziswa zizigidi zabantu mihla le ukwenza iividiyo ezimfutshane. Le app iqhele ukusetyenziswa lulutsha ukubonisa italente yabo kunye nobuchule.
Ezi ntsuku iTikTok inesibambiso sezigidi zabasebenzisi kwaye le app yenye yezonaapps zidumileyo kwihlabathi liphela. Ukuze ube yinkwenkwezi yeTikTok, awudingi ukuba yinkwenkwezi edumileyo. Nabani na onokufaka umxholo wakhe kwiTikTok kwaye abe yinkwenkwezi ngokubonelela ngomxholo onomdla kubalandeli.
Enye into enomdla malunga neTikTok kukuba unokufumana uluhlu olwahlukileyo lomxholo njengeevidiyo zomdaniso, ukuvumelanisa imilebe, iingoma, njl. Abenzi beNetizens bacinga ukuba le vidiyo intsha yakutshanje iyonwabisa kwaye yabenza bahleka.
Kule nqaku, ndiza kukuxelela ngakumbi malunga nale vidiyo ehamba phambili. Ndiza kukuxelela ukuba ngubani kanye kanye uJamie Lee On Tikok? Ke, ngaphandle kokuqhubeka, masiqale.
Ngobani Ntshangase on TikTok
Yithi Molo Jamie Lee TikTok
Ukuphendula kwabasebenzisi beMithombo yeendaba kuVidiyo yakhe:
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba kutheni abantu bekhathazeka yile vidiyo ye-virus? Kuza kuba nzima kum ukuyichaza ngamagama. Apha, ndiza kwabelana ngevidiyo ukuze uyiqonde ngokucacileyo.
Apha unokufunda elinye inqaku Ndifun 'iTikTok Trend
A Tiktoker from Norther Island has uploaded a video ”Yithi Molo Jamie Lee” kwi TikTok. Ngomhla we-9 ka-Epreli, uCaitlin Watter oneminyaka engama-22 ubudala ulayishe ividiyo apho wakhwaza umhlobo wakhe ogama linguJamie Lee.
Njengoko ubonile kwividiyo, uCaitlin Watter wajika ikhamera yakhe yaba nguJamie Lee, owayehleli esihlalweni esingaphambili semoto. Ukhwaze wonke umntu ngononophelo kwaye ngenxa yendlela acacisa ngayo eIreland, kunzima kakhulu ukuba aqonde eyona nto ayithethayo. Isimbo sakhe songeza uburharha kwividiyo.
Kwividiyo yeJamie lee TikTok, akukho nto inomdla ngaphandle kogcino lwakhe. Ukuthetha kwakhe kuyabhidisa. Akululanga kuye wonke umntu ukufumana le nto ayithethayo. Oku kuyenzile ividiyo yakhe yahlukile kwaye yahlekisa. Abantu abohlukeneyo babelana ngeevidiyo zabo apho bazama khona ukukopa indlela yakhe yokubonisa.
Le vidiyo yahamba yintsholongwane njengomlilo wasendle kwaye abantu bayenzile ividiyo yabo Yithi Sawubona uJamie Lee. Oku kubonisa ukuba bayayithanda. Imemor ziyiguqule zayimemes eyahlukeneyo kwaye abantu bayayicaphula kwi-Twitter.
Umntu wathumela umyalezo kuTwitter: “Le ntombazana inoxanduva lweyona vidiyo imnandi ndakhe ndayibona kule minyaka…. Qhubeka wee Jamie Lee wena Ntsomi ”.
Enye i-tweet: Ndicinga ukuba ndilikhoboka levidiyo kaJamie Lee esenza ujikelezo namhlanje.
I-TikTok ihlala ithandwa kulomxholo kwaye akukho nto intsha kubasebenzisi beTikTok. Iividiyo ezinje ngo 'Molo uJamie Lee' ziye zangena kwintsholongwane kwaye zaba ziintsingiselo ngamanye amaxesha kwaye kamva zaphela.
IiTiktokers ezahlukileyo zabelane ngeevidiyo zazo Molo Jamie Lee onokufumana ngokulula kwimithombo yeendaba. Ukuba ucinga ukwenza ividiyo kwiTikTok, ndiza kukucebisa ukuba uyizame kuba iya kwenza abalandeli bakho bahleke.
Ndiyathemba ukuba esi sithuba sikwazile ukucacisa konke ukudideka kwakho ngokubhekisele kuYamiee Lee. Ungalibali ukwaba uluvo lwakho nathi kwicandelo lamagqabaza apha ngezantsi.
iindidi I-Tiktok tags Yithi Molo Jamie Lee TikTok, Ngobani Ntshangase on TikTok Post yokukhangela
I-Symmetry Filter ye-Instagram: Ungayifumana njani?